Yikuphi ukudla okuthuthukisa imetabolism?
Isimo sengqondo somuntu singcono kakhulu lapho kuqhubeka khona izinqubo zemithi. Kwakukhona izinkinga nge-metabolism - ngokushesha kwavela ama-kilogram ama-superfluous, futhi izinga lokushaywa kwesikhumba landa. Sivame ukuzwa inkulumo mayelana nokuthi "kungaba yini ukudla ukuze ulahlekelwe isisindo ...". Yiqiniso, lokhu kuyihlaya, kodwa kulowo nalowo kubo, njengoba bekusho, kuphela isabelo salesi sihlabelelo. Phela, kukhona imikhiqizo, ngokusetshenziswa kwamakhomikhali okuthuthukiswayo, futhi akukho ama-pounds engeziwe abonakalayo. Yiziphi imikhiqizo ezithuthukisa umzimba, sizotshela namuhla.
Njengoba wazi , amanzi kuqala kokuqala konke okusemhlabeni. Kuyinto yonke indawo, futhi ngaphandle kwayo ukuphila ngokwayo akunakwenzeka. Ososayensi benze ucwaningo oluningi, okwakubonisa ukuthi amanzi, njengoba umkhiqizo obaluleke kunazo zonke, ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu zokuvuselela izinqubo zamathambo. I-80% yalo mzimba wethu, futhi ihileleke kuzo zonke izinqubo zomzimba. Ukwanela okwanele kuholela ekunciphiseni izinqubo zokuxuba umzimba, kepha uma amanzi anele ngokwanele, izinqubo zamathambo zenziwa ngamaphesenti angu-100. Ukuze uthole impilo evamile, umzimba womuntu udinga amalitha amabili ngosuku.
Omunye wemikhiqizo ebaluleke kunazo zonke evuselela izinqubo zokuqubuzana ne- pepper . I-Pepper, kokubili igromegranate kanye nezivunguvungu, isakhiweni sayo se-capsaicin ye-substance, eyenza ngcono izinqubo ze-metabolic. Ososayensi baye bafakazela ukuthi ukudla okuphasiswe ngamaphilisi kunesisindo esinamandla, okuholela ekusheshiseni kwezinqubo ze-metabolic cishe ngekota. Futhi kubonakala ukuthi i-capsaicin inobungozi emathisini amancane angama cell. Lesi sici sithinta i-mitochondria yamaseli, anesibopho sokunikeza amangqamuzana amandla, okuholela ekufeni kwawo.
Itiye elihlaza libuye lithuthukise umzimba emzimbeni. Izinto zetiye zivimbela ukwakheka kwama-radicals mahhala, zenze isifo se-prophylactically ngezifo zenhliziyo nemithambo yegazi. Ithigi elihlaza likhula ngesivinini sesimetabolism.
Imikhiqizo yobisi ephansi kakhulu ibuye ibe nama-agent ahle kakhulu okuthuthukisa umzimba. Nokho, bambalwa kakhulu abantu abazi ngalokhu. Unalo i-calcium eningi. Imikhiqizo yobisi isiza umzimba ukuthi ukhiqize i-calcitriolane, i-hormone esisiza amaseli ashise amafutha. Ososayensi baye bafakazela ukuthi ukusetshenziswa okuvamile kwemikhiqizo yobisi kungandisa izinga lokunciphisa umzimba ngamaphesenti angu-70.
Yiqiniso, ukukhuluma ngemikhiqizo evuselela izinqubo ze-metabolic, asikwazi ukusho ngezithelo ze-citrus . Umusi we-grapefruit, isibonelo, unciphisa izinga le-insulini egazini, okunciphisa isifiso sokudla "noma yini." Futhi, njengoba wazi, kancane ukuthi uyadla, amakhilogremu ambalwa ongena emzimbeni, futhi ngenxa yalokho, amakhilogremu ambalwa owatholayo. Izithelo ze-Citrus zivuselela umsebenzi we-digestive tract futhi zandise umkhuhlane womzimba. Ziyisisombululo esihle kakhulu sokuvimbela izifo zenhliziyo, imithambo yegazi, isibindi. Ngokwalo, i-vitamin C yinto engazinzile, kodwa uma uqhathanisa imifino nezithelo, izithelo ze-citrus "zibamba" ngokwazo zonke zinamandla kakhulu. I-Orange, i-tangerine, ijusi kalamula noma emva kokubilisa kahle kugcina amavithamini. Izithelo ze-Citrus ziwusizo kokubili fresh futhi ekheniwe.
Kuyaziwa ukuthi imikhiqizo yonke ibuye ithuthukise umzimba. Banezinhlanzi eziningi. Ukugaya izintambo zemvelo, umzimba udinga amandla amaningi, ngakho-ke, udla amakholori amaningi. Imikhiqizo egcwele okusanhlamvu igcina zonke izakhi kanye namavithamini ngendlela yabo yemvelo. Ngenhlanhla, namuhla ezitolo ungathola ukuthengiswa okucebile kwemikhiqizo egcwele okusanhlamvu.
Abaningi bakuthola kunzima ukucabanga ukudla ngaphandle kokungezwa kwemikhiqizo yenyama. Kodwa akunakwenzeka kuphela, kodwa kuyadingeka kakhulu. Into kuphela, inyama akufanele ibe namafutha kakhulu. Izinhlanzi ezifanelekayo, izinkukhu. Inyama icebile amaprotheni, okuyinto umzimba ugoba ngobunzima. Ngakho-ke, ukuyigaya, umzimba uzodinga ukwandisa izindleko zamandla futhi ushise amakholori amaningi. Ngokusetshenziswa kwemikhiqizo yezinyama, izinqubo zemithi ziyashesha ngamaphesenti angaba ngu-50.
Ukusheshisa izinqubo ze-metabolic zezinongo zomzimba ziyasiza kakhulu. Kufaka i-ginger, amakhambi, isinamoni nezinye izinongo ezinomsoco ekudleni kwakho, sikhulisa isilinganiso samanzi ngamaphesenti angaba yishumi futhi sivuse umzimba wonke.
I-Sladkoekhkam izojabula ukuzwa ukuthi ungadla ushokoledi ngaphandle kokuzwa ubuhlungu benembeza, kodwa kuphela wemvelo, hhayi ubisi noma enye. Ushokoledi wemvelo onomsindo uphinde uthuthukise imizimba yomzimba.
Ungasheshisa umsebenzi we-metabolism, usebenzisa amantongomane , akudingeki ukuthi uhileleke. Banikeza umuzwa wokugcwalisa, kepha ngesikhathi esifanayo banama-caloric kakhulu.
Ilayisha usuku ku-buckwheat
Ungasusa kanjani izifiso zamaswidi?
Isondlo esifanele empilweni yomuntu
Kungani kungabonakali umoya omusha
Abakwa-Crackers nge-chocolate namantongomane
Ama-veicic veins of extremities
Izihlathi ze-Chubby: indlela yokulahlekelwa isisindo ebusweni
Yiziphi izimbangela ze-hypotension?
Ungayinakekela kanjani izinwele ezisekhaleni?
Ama-pancake aseHungary ngenhliziyo
Izigaba zamahhala zamahhala ukusuka ku-Amway kulabo abathanda indlu yabo
Izindlela zokupheka zokudla okulwa ne-cellulite
Siyakuhalalisela ngosuku lukaTatyana ngo-2017: ama-sms amafishane amafishane evesini nase-prose. Amakhadi okubingelela weTatiana ngoJanuwari 25
I-mastic evela e-marshmallow
Indlela yokuphatha umkhuhlane emntwaneni omncane
Indlela yokuqinisa imisipha yomzimba ngesikhathi sokukhulelwa?
Ibhizinisi eliyisisekelo lokugqoka i-wardrobe
Umndeni omkhulu nezinkinga zawo eziyinhloko
Indlu yezitshalo ze-pahir